गगन थापाले महामन्त्री जित्नुमा मुख्य हात केपी ओलीको ? यस्तो छ रहस्य ! - ramechhapkhabar.com
गगन थापाले महामन्त्री जित्नुमा मुख्य हात केपी ओलीको ? यस्तो छ रहस्य !
नेपाली काग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापा भारी मतका साथ नेपाली काग्रेसको महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । थापाकै टिमबाट सभापतीका उमेदवार बनेका शेखर कोइराला पराजित भइरहँदा थापाले झण्डै दुई तिहाइ मत सहित निर्वाचित भए पछि दुनियाँ चकित भएका छन् ।
रोचक पक्ष के छ भने आफ्नो प्यानल बाट सभापतीको उमेदवार रहेका कोइराला मात्रै पराजित भएनन् गगन सँग महामन्त्रीका अर्का उमेदवार बनेका मिनेन्द्र रिजाल समेत कन्तिविजोग तरिकाले पराजित भए । गगनले झण्डै दुई तिहाइ मत सहित महामन्त्री बाजी मार्दा रिजालले छ जना प्रतिष्पर्धीहरु मध्ये पाँचाँै स्थान मात्रै ल्याउँन सफल भएका थिए ।
नेपाली काग्रेस जस्तो गुट ग्रस्त राजनिती दलमा सबै गुटका मान्छेको विश्वास जितेर यति धेरै मत ल्याएर महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनु पक्कै पनि चानचुने कुरा थिएन तर त्यो गगनले पुरा गरेर देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनले कसरी आफ्नो सपनालाई विपनामा परिणत गर्न सके भन्ने विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
काग्रेस सभापतीमा नेतृत्व परिवर्तन नखोजेको तिनै महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले दिएको मतमा काग्रेसमा अन्यन्तै सेलिब्रेटी क्रेज बनाएका दुई युवालाई महामन्त्रीको चाबी बुझाएका छन् ।
काग्रेस भित्र जबर्जस्त उठिरहेको पुस्तान्रणको आंशिक आशा गगन र विश्वप्रकाशको बिजयले दिएको छ । युवा प्रतिको आशा र आकर्षणले गगनले महामन्त्रीमा बाजी मार्नका लागी काम गरेको भन्न सकिन्छ तर त्यति मात्रै होइन ।
नेपाली काग्रेस भित्र गगन थापा आफ्नो भाषणका कारण चर्चित छन् गगनलाई यो स्थान दिलाउँनका लागी उनको वाकपटुकताले निकै काम गरेको भन्न सकिन्छ गगन गर्जदा देशभरीका काग्रेसमा एकै पटक उर्जा प्रेषित गर्न सक्ने सामर्थ उनी राख्दछन् । थापाले महामन्त्रीमा बाजी मार्नुको अर्को खास कारण भने एमाले अध्यक्ष ओली रहेको पनि चर्चा बजारमा चल्न थालको छ ।
शक्तिको एउटा नियम छ शक्ति आर्जन गर्नका लागी आफु भन्दा शक्तिशाली शक्ती माथी प्रहार गर्ने, यो सिद्धान्तको उनले राम्रो सँग प्रयोग गर्न सफल भए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला र प्रधानमन्त्री बाट बाहिरिएर प्रतिपक्षी भएका बेला पनि थापाले ओली माथी निरन्तर प्रहार गरिरहे जसको कारण देशभरका काग्रेसहरु उनी सँग सकारात्मक हुन पुगे ।
संसद देखी सडक सम्म पटक पटक केपी ओली र गगन थापाको जुहारी परेको काग्रेस प्रतिनिधीहरुले देखेका थिए । आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई कुचो लगाएर बढार्ने हो भनेर थापाले भक्तपुरमा पुगेर भाषण गर्दा ओलीले एक
जना बावुले एमालेलाई बढार्ने भनेछन् भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । थापाले बोलेको बिषयमा ओलीले प्रतिक्रिया दिँदा राम्रो कभरेज पायो र अन्तत त्यसको फाइदा गगनले उठाए ।
एमाले महाधिवेशनलाई ओलीवेशन भनेर समेत थापाले प्रहार गरेका थिए , हुँदा हुँदा थापाले के सम्म गरे भने महाधिवेशनको मुखमा आफ्नो अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै ओलीले अघि सारेको सम्वृद्ध नेपाल सुखि नेपाली जस्तै समुन्नत नेपाल सम्मानीत नेपालीको नारानै अघि सारे । हरेक कुरामा ओली सँग टक्कर लिन थाले पछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उनलाई अहिले भएको विश्लेषण भएको छ ।
ओलीलाई गाली गरेरै बनाएको व्यक्तित्वले गगन थापाले काग्रेसको महामन्त्री सम्म निर्वाचित हुन त सफल भएका छन् अब उनको परिक्षणको कसी सुरु भएको छ । भाषणमा जस्तै काममा खरो उत्रन सक्छन् की सक्दैनन् यसले उनको भविश्यको राजनितीक गोरेटो तय गर्ने छ ।